कसो योगेश कमरेड ?, ओलीको व्यंग्य ?, गगनको गन्गन् !
काठमाडौं, २९ फागुन । कसो योगेश कमरेड ? ईश्वर तैले रचेर फेरि कसरी बिगारिस...भन्ने मुना मदनको गीतजस्तै बन्यो महासचिव ईश्वर पोखरेलको मन्त्री यात्रा । सुरुमा सबैले उनी अर्थमन्त्री बन्छन् भन्ने अड्कल काटेका थिए, अन्त्यमा रक्षामा थन्कनु पर्यो ।
रक्षामन्त्री भएपछि बधाई दिने पनि कम हुँदा रै’छन् । त्यसैले रक्षामन्त्री पोखरेल दिनभर घाम तापेर दिन बिताइरहेका छन् । गत साता उनलाई बधाई दिन काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत यु होङ रक्षा मन्त्रालय पुगिन् ।
राजदूत होङलाई रक्षामन्त्रीले खुकुरी उपहार दिए । बुद्धको देश नेपाल भएको नाताले बुद्धको मुक्ति दिएको भए राम्रो हुने विचार सामाजिक सञ्जालभरि फैलियो । तर, यति सुझाव दिने मान्छे पनि पोखरेलसँग रहेनछन् । कसो, योगेश कमरेड ?
ओलीको व्यंग्य ?
गत शुक्रबार वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन उद्घाटन गर्न गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सकहरुलाई व्यंग्य गरेर, सचेत गराए । तर, चिकित्सकले कति कुरा बुझे कुन्नी ? ओलीको कुरा सुनेर चिकित्सकहरु पेट मिचीमिची हाँसे ।
ओलीले भने–अप्रेशन गर्दा दाहिने र देब्रे घुँडा पनि छुट्याउन नसक्ने ? एउटा दाँत दुखेको छ, अर्कै दाँत उखेलिने ? यस्तो पनि नेग्लिजेन्स हुन्छ ? त्यस्तामाथि कारबाही गर्नु पर्छ भन्ने समाचार टेलिभिजनमा हेरिरहेका नर्भिकका मालिक बसन्त चौधरी ट्वाँ परे ।
गगनको गन्गन् !
पछिल्लो समय सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाको गन्गन् जनताले निकै मिठो मानेर सुन्न थालेका छन् । वाम गठबन्धनको झण्डै दुई तिहाई मत आएदेखि नै अत्तालिएर खड्ग्रङ्ग हुन पुगेको पार्टीलाई नयाँ नयाँ एजेण्डामा लैजान उद्यम रहेका गगन थापा पछिल्ला समय निकै गन्गन् गर्न थालेका छन् ।
केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकैदेखि छाँया सरकारको कुरा अघि सारेर कांग्रेसभित्र नयाँ बहसको विषय उठाएका थापा अहिले पुनः अर्को विषय अघि सारे र चर्चामा छन् ।
नेविसंघमा हुँदा पनि रातो फेटाधारी पत्रकारको शैलीमा चर्चामा आउनकै लागि गगन थापाले गणतन्त्रको नारा लगाएकोमा यतिबेला सिंगो कांग्रेस कोमामा पुगेको मौका छोपेर पार्टीभित्र लोकप्रिय हुने अभियान अन्तर्गत नयाँ नयाँ नारा ल्याएर गन्गन् गरिरहेका छन्, खबर दृष्टिको बक्रदृष्टिमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय उनले प्रधानमन्त्री खबरदारी केका लागि हो ? भन्ने रहस्य अझै खुल्न सकेको छैन । घैंटेसँग संगत गरेर हप्ता असुली झै सरकारसँग पनि असुलीका लागि हो वा पार्टीभित्र लोकप्रियताको लागि हो ? बुझ्नै नसकिने कुरो ।